अनुदान पाएपछी साना विद्युत आयोजनाको काम तीब्र, एक बर्षमा ताराखोला झिलीमिली हुने ! – ebaglung.com
अनुदान पाएपछी साना विद्युत आयोजनाको काम तीब्र, एक बर्षमा ताराखोला झिलीमिली हुने !
२०७४ जेष्ठ ३०, मंगलवार १५:४७	Footer Slider, Home Slider, Top News, प्रमुख समाचार
खगेन्द्र विश्वकर्मा, बागलुङ २०७४ जेठ ३० । समुदायको लगानीमा संचालन गरेको ताराखोला साना जलविद्युत आयोजना ३ सय ८० किलोवाट क्षमताको आयोजनाको कुल लागतको आधा अनुदान ९ करोड १२ लाख रुपैया नेपाल सरकारबाटयहि बैशाख २५ गते स्वीकृत भएको छ ।
अब आयोजनाको निर्माण काम तिव्र गतिमा अगाडी बढ्ने र आउदौ २०७५ असारसम्ममा विद्युत उत्पादन हुने ताराखोला साना जलविद्युत आयोजनाको सचिव कुलबहादुर रोकाले जानकारी दिए। उनका अनुसार कुल लागत १८ करोड २ लाख रुपैया लागत स्तमेटमा सम्पन्न हुने गरी योजना अगाडि बढाईएको छ । जसमा जनताबाट शेयर संकलन करी ५ करोड ५ लाख २ हजार ५ सय ७० रुपैया संकलन भएको थियो ।
कुल लागत १८ करोड २ लाख मध्य सरकारी अनुदानबाट ९ करोड २ लाख रुपैयमा समुदायको शेयर रकमबाट ५ करोड ५ लाख २ हजार ५ सय ७० रुपैया १४ करोड ७ लाख २ हजार ५ सय ७० बाठ बाँकी ४ करोड रकम अपुग भएको छ । नपुगेको ४ करोड रकम पहिलो प्राथमिकता समुदायमै शेयर विक्री गर्ने गरी जनताको घरदैलो अभियान जारी राखिएको छ ।
समुदायमा शेएर विक्री भै नपुग भएको रकम विभिन्न सहकारी तथा कम्पनीमा शेएर बेचेर रकम पुरा गरी विद्युतको काम सम्पन्न गर्ने ताराखोल साना
कुलो तथा पाईप जडान कार्य चलिरहेको छ । लामो समय पछी सरकारी अनुदान रकमको कागजात मिलाएर नेपाल सरकारबाट अनुदान रकम विद्युत निमार्ण जेकेडार कम्पनी सूर्य हैम्जो जेवि कम्पनीको खातामा १ करोड ८२ लाख ४० हजार अग्रीम रकम प्राप्त भै सकेको छ भने कार्य सम्पादनको आधारमा २० प्रतिशत रकम दिने र ३० प्रतिशन रकम कार्य सम्पन्न भैसको पछी मात्र दिने र बाँकी रकम विद्युत बलेको १ बर्ष पछी दिने नेपाल सरकारले ठेकेदार कम्पनीको खातामा रकम दिने कानूनी प्रक्रिया छ ।
स्मरणीय छ, विविध कारणले यो ताराखोला साना जलविद्युत आयोजनाको काम केहि वर्ष देखी अलपत्र परेको थियो । निर्माण सामाग्रीहरु लथालिंग अवस्थामा देखिन्थे । जनही रु १५ हजार भन्दा बढी रकम शेयर हालेका सयौँ स्थानीयवासी रकम डुबेकोमा चिन्तित थिए । निर्माण कार्यले गति लिन नसक्दा आयोजनानै धराशायी हुने संभावना रहेको स्थानीयले वताईरहदा निर्माणकार्यले गति लिएपछी उपभोक्ताहरुमा खुशी छाएको छ ।
आफैमा सुन्दर छ, काँडेवास
बालशिक्षक तालिम सम्पन्न : बालशिक्षामा बागलुङ देशकै नमुना – जिशिअ मिश्र